MAQAAL: Tirada Muujineysa Xajmiga Dhibaatada Kooxda Real Madrid – Kooxda.com
Home 2018 January Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino MAQAAL: Tirada Muujineysa Xajmiga Dhibaatada Kooxda Real Madrid
MAQAAL: Tirada Muujineysa Xajmiga Dhibaatada Kooxda Real Madrid
Ka dib guuldaradii 1-0 ee ka soo gaartay Villarreal garoonka Estadio Santiago Bernabeu,xilli ciyaareedka Real Madrid ayuu hoos u dhac ku yimid waxaana haatan jira tiro si buuxda u muujineyso xaalada dhibaatada haysata kooxda.
Inkasta oo ay kooxda Zinedine Zidane hal kulan baaqi u haysato marka ay ciyaarto Barcelona waxa ay 19 dhibcood ka dambayn doontaa kooxda Tababare Vaverde ee Barcelona.
Hadii ay Kooxda Barcelona guul ka gaarto kooxda Real Sociedad 19 dhibcood ayaa si Rasmi ah u noqon doona dhibcihii ugu badbnaa ee ay Los Blancos abid ka dambaysay kooxda hogaanka haysata qaybta hore ee xilli ciyaareedka.
Rikoorkii ugu dambeeyay ayaa ahaa xilli ciyaareedkii 2012/2013 markaas oo Real Madrid oo uu hogaaminayo Jose Mourinho 18 dhibcood ka dambaysay kooxda Barcelona.
Qaybta hore ee xilli ciyaareedka La Liga kooxda difaacanaysa horyaalka ayaa 22 dhibcood lumisay iyada oo 4 kulan laga badiyay 5 kalena bar-baro gashay.
Hadii aynu eegno xilli ciyaareedkii hore Los Blancos ayaa kaliya Lumisay 21 dhibcood xilli ciyaareedkii dhamaa.
Wakhti xaadirkan hadii uu xaalku sidaas ku sii socdo waxa ay noqon doontaa wakhtigii ugu xumaa kooxda ee taariikhda la Liga iyada oo ay wax is badalaan mooyaane.
Xitaa hadii ay badiyaan kulamada horay horyaalka oo dhan ma bar-barayn karaan dhibcihii 93-ka ahayd ee ay xilli ciyaareedkii hore kuq qaadeen horyaalka La Liga.
Iyada oo ay ku xirantahay natiijada Barcelona kooxda difaacanaysa horyaalka ayaa qaybta hore ee xilli ciyaareedka ku dhamaysan karta iyada oo ku dhaw kaalmaha ugu hooseeya horyaalka halkii ay ku dhamaysan lahayd iyada oo u dhaw kaalaha ugu sareeya horyaalka.
Marka aad eegto tayada xiddigaha kooxda ku waliba soo bandhigaya qaab ciyaareedka aadka u liita.
iibintii Alvaro Morata Iyo James Rodriguez ayaan ahayn mid khalad ah laakiin waxa khalad ahaa in la buuxin waayo booskii ay baneeyeen.
Dhanka goolasha hadii la eego kooxda Madrid ayaan laba guuldaro oo xiriir ah la kulmin iyada oo garoonkeeda ku ciyaaraysa wax gool ahna aan dhalin markii ugu horaysay tan sanadkii 2006/2007.
Sidoo kale Real Madrid ayaan laba guuldaro oo xiriir ah oo waliba garoonkeeda ah la kulmin tan iyo 2008/2009 iyada oo wakhtigaas laba guuldaro oo xiriir ah kala kulantay kooxaha Barcelona Iyo Real Mallorca iyada oo joogta garoonkeeda.
Dhanka dhibcaha hadii aynu eegno waxa ay mid la yaab ah noqotay in markii Rafael Benitez shaqada laga cayriyay xilli ciyaareedkii 2015/2016 waxa uu helay 37 dhibcood qaybta hore ee xilli ciyaareedkan waana mid 5 dhibcood ka badan dhibcaha uu Zidane haatan helay qaybtii hore ee xilli ciyaareedka.
Tani ma soo jeedinayso in shaqada xiddigii hore ee Juventus ay khatar ku jirto laakiin waxa ay u qalantaa in dib loo eego maadama tababarayaal ka qaad ciyaareed fiican ay shaqdooda ku waayeen qaabkan.
Mida wel-wel-ka keenay ee ku saabsan kufitaanka kooxda Real ayaa ah in ay u ogolaanayaan in ay kooxaha la ciyaaraya ku samaynayaan taariikho cusub.
Guushii ay xalay Villarreal k gaartay Estadio Santiago Bernabeu ayaa ah midii ugu horaysay ee ay abid ka gaarto garoonkaas halka Guushii Betis ay noqotay midii ugu horaysay mudd 19 sano ah kadib.
Kooxda Girona ayaa Real Madrid ka gaartay guul kulankii ugu horeeyay ee ay abadi wada ciyaaraan halka kooxaha Fuenlabrada Iyo Numancia ay labadooduba bar-baro ku galeen garoonka caanka ah ee Real kulamadii Copa del Rey waxana ay in badan ku jiri doontaa qalbiga taageerayaashooda.